Le Nqubo Eyodwa Yokuthengisa Kungenzeka Ilahle Inkampani Yakho Ama- $ 4 Million Ngonyaka | Martech Zone
Sivame ukukhuluma ngokuthengisa ngemali ekhiqizwayo, kepha hhayi ngokulahlekelwa lapho kungahambi kahle. Ukuthengisa kungumdlalo wegazi ezinkampanini eziningi futhi kubonakala sengathi kunesineke esincane kulezi zinsuku ukuthi ochwepheshe bezentengiselwano bakhuphuke, bakhe ubudlelwano, futhi baguqule amakhasimende. I- umphathi wezentengiso inesikhundla esingenakulinganiswa sokugqugquzela nokushayela abasebenzi ukuthi bahlangane futhi badlule imigomo. Ngenisa umphathi ongalungile futhi bonke abasebenzi bezentengiso bangaphazamiseka. Ngizibonele ngawami mathupha, ngibheka ukugxila kwabaphathi bezentengiso kuziphakamiso, ukufakwa kwedatha noma ukukhuthaza umuntu owesabekayo ekuthengiseni abe sesikhundleni esingaphandle kwe-bailiwick yabo.
Ubuchwepheshe bokuthengisa buyithuluzi lokusiza abasebenzi bakho bezentengiso futhi banike amandla ikhono labo lokuhamba kahle nangempumelelo. Akufanele kube kuphakamisa izithiyo, kufanele kube kuzisusa. Yisinye sezizathu esenza sithande i- Ukuthengiswa ipulatifomu (umxhasi) kakhulu. Ideshibhodi yabo eya ku-Salesforce kubo bobabili abathengisi nabaphathi isinciphisa kakhulu isikhathi sokuqopha, ukulandelela nokubika ngomsebenzi wokuthengisa.
Abaphathi abaningi bezentengiso bathola ukuxhaswa okuncane kokuthuthuka okuvela ezinhlanganweni zabo. Esikhundleni salokho, kulindeleke ukuthi banqobe izinselelo zombili zokushintshela ekuphathweni kanye nokuvela kokuthengisa imikhiqizo kuya ekuhlinzekeni ukuqonda kwezebhizinisi ngokwabo. Kulezo zinhlangano ezitshala izimali zazo kubaphathi bazo, iningi lehluleka ukufaka imali ngamasu okuthuthukisa amakhono adingekayo ukwenza abaphathi basebenze ngangokunokwenzeka. Lokhu akugcini nje ngokuba nomthelela omkhulu kubaphathi ngokwabo, kodwa futhi kwenza abathengisi bangasebenzi kahle futhi, ekugcineni, kulimaza umugqa wenkampani. UJessica Cash, Umqondisi Omkhulu, Ukuxazululwa Kwesixazululo Nokusungula kwe-CEB Global.
Okusemqoka ukuthi umphathi ohlulekile oyedwa angalahlekelwa yinkampani engaphezulu kwezigidi ezingama- $ 4 kumkhiqizo olahlekile, ukuphathwa kweqembu elimpofu, ulwazi lwabathengi olunqabile, ukuqashwa, umholo nokuqeqeshwa. Nakhu ukuwohloka kwe- abaphathi bezentengiso bahluleka kanjani.
Tags: ukuphathwa kabiCEBamabhulogi we-cebuhlulekaukwehlulekajessica ukheshiizindleko zokuphathaideshibhodi yokuthengisaUkunika Amandla Ukuthengisaemisha yokuthengisaukuphathwa kokuthengisaizindleko zokuphatha ukuthengisaumkhiqizo wokuthengisaukunxenxa ukuthengisayokubika yokuthengisaumholo wokuthengisaiqembu lokuthengisaukuqeqeshwa kokuthengisaukuthengisa
Ungawusebenzisa Kanjani Umbhalo Wakho Wokubhala Wezinjini Zokusesha ngo-2014